Hot-Dip nandrisika welded Wire harato - China Hebei Samsung Metal Wire harato
Welded tariby harato iray fitaovana malaza amin'ny simenitra, fanorenana sy ny indostria. Izany dia vita tamin'ny tariby ambany karbaona vy, Stainless vy tariby rehefa welding sy ambonin'ny fitsaboana. Welded tariby harato lamba no be mpampiasa amin'ny TRANO, FANORENANA, rafitra fiarovana, filtration, sakafo, fambolena sy ny sisa. Hot-tariby niara-nanatsoboka tafo welded harato no ankapobeny voaforon'ny ny vy tsotra tariby. Tamin'ny fotoana mandeha amin'ny alalan'ny fanodinana izany mafana ny zinc dingana sarona. Io karazana harato welded fantany amin'ny toradroa op ...
Supply Fahaizana: 200 Roll / Rolls isan'andro
Welded tariby harato iray fitaovana malaza amin'ny simenitra, fanorenana sy ny indostria. Izany dia vita tamin'ny tariby ambany karbaona vy, Stainless vy tariby rehefa welding sy ambonin'ny fitsaboana. Welded tariby harato lamba no be mpampiasa amin'ny TRANO, FANORENANA, rafitra fiarovana, filtration, sakafo, fambolena sy ny sisa.
Hot-tariby niara-nanatsoboka tafo welded harato no ankapobeny voaforon'ny ny vy tsotra tariby. Tamin'ny fotoana mandeha amin'ny alalan'ny fanodinana izany mafana ny zinc dingana sarona. Io karazana harato welded fantany amin'ny efamira fanokafana dia mety tsara ho an'ny biby tranom-borona firafitra, ny mamoron-tariby vata, grilling, fisarahana fanaovana, makarakara fiarovana tanjona sy ny milina fencing.
Hot-tariby niara-nanatsoboka tafo welded toetra: fisaka sy fanamiana ambonin'ny, rafitra hentitra, tsy mivadika sy ny tsara tsara tsara mahatohitra harafesiny.
Io karazana welded tariby roa fanodinana amin'ny dingana orinasa mpamokatra entana, galvanizing welded harato aloha na aorian'ny welding. Ny nandrisika welded tariby harato aorian'ny welding dia tsara noho talohan'ny welding ny zorony welding. Noho ny mafana-natsobony galvanizing, welded tariby afaka hisorohana ny harafesiny amin'ny fampiharana isan'andro.
Hot-tariby niara-nanatsoboka tafo welded famaritana:
1) Hot mandroboka nandrisika welded harato + PVC coating (Green 6005): 12.7 × 12.7mm / tariby savaivony anaty 0, .65mm - mifono 0.90mm / horonan-taratasy haavon'ny 100cm / horonan-taratasy lava 5m.
2) Hot mandroboka nandrisika harato (nandrisika aorian'ny welding): 12.7 × 12.7mm / tariby savaivony 0.65mm / horonan-taratasy haavon'ny 50cm / horonan-taratasy lava 5m.
3) Hot mandroboka nandrisika harato (aorian'ny fanenomana) + PVC coating (Green 6005): volovolo 25mm / tariby savaivony anatiny 0.80mm - mifono 1.00mm / horonan-taratasy haavon'ny 50cm / horonan-taratasy lava 10m.
4) Hot mandroboka nandrisika harato (nandrisika aorian'ny fanenomana): volovolo 13mm / tariby savaivony 0.70mm / horonan-taratasy haavon'ny 50cm / horonan-taratasy lava 10m.
Tensile hery: 300 - 450 N / mm².
Ho-up: 150kg coils tamin'ny anatiny dia. ny +/- 270mm sy ny ivelany dia. ny +/- 450mm.
GI toradroa tariby harato famaritana:
24.75kg / horonan-taratasy
Efa mafana nandrisika welded tariby harato amin'ny tahiry lehibe:
Hot fanitso welded tariby harato
Hot-mandroboka nandrisika welded tariby harato
Nandrisika welded Wire harato (nandrisika Rehefa Weaving) Hot Dip nandrisika Wire
Nandrisika welded Wire harato (nandrisika Alohan'ny Weaving) Hot Dip nandrisika Wire
PVC welded harato (mafana niara-nanatsoboka)
Previous: Electro nandrisika welded Wire harato
Manaraka: Staninless Steel Razor tariby Wire
Hot niara-nanatsoboka nandrisika welded Wire harato
Hot natsobony welded Wire harato